NV ကတ် ထုတ်ပေးသည့် အခြေအနေ နော်ဝေသံအမတ် လာရောက်လေ့လာ - Yangon Media Group
ရခိုင်ပြည် နယ်အပါအဝင် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အလိုက် NV ကတ်ထုတ် ပေးသည့်အခြေအနေကို ဇူလိုင် ၂၅ ရက်က နေပြည်တော်ရှိ အ လုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနရုံးသို့ နော်ဝေသံအမတ် လာရောက် လေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအပြင် NV ကတ်မှ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား ပြောင်းလဲထုတ်ပေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ၊ မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေး ဆောင်ရွက်သည့်အခြေအနေနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူမှုစီးပွား ဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း ပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို နော်ဝေ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး HE. Ms Tone Tinnes က လာရောက်လေ့လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။
”ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကိုထွက်ပြေး တိမ်းရှောင်တဲ့သူတွေကို ပြန်လည် လက်ခံတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေ၊ ရခိုင် ပြည်နယ်အတွင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာမှုအခြေအနေတွေရော၊ NV ကတ်ထုတ်ပေးမှုအပိုင်းပေါ့။ ကျွန် တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ Norwegian Refugee Council (NRC) နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ နိုင်ငံသားစိစစ် ရေးကတ်ပြားတွေထုတ်ပေးမှု အခြေအနေတွေနဲ့ ဆက်လက်ပူး ပေါင်းမယ့်အခြေအနေတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်”ဟု လဝကမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဇူလိုင် ၂၆ ရက်တွင်ပြောသည်။
ယင်းအပြင် ရခိုင်ပြည်နယ် အကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အ ထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအ နေ၊ UNDP နှင့် UNHCR တို့ ၏ နားလည်မှုစာချွန်လွှာအရ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံသို့ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်သူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ဆန္ဒအရ လုံခြုံစိတ်ချစွာပြန်လာနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးမည့်အစီ အစဉ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုစီးပွားဘဝတိုးတက်ရေးအတွက် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည့်လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ လက်ရှိတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း NV ကတ်ထုတ်ပေးမှုအ ပေါ် လာရောက်လုပ်ကိုင်လိုသူ နည်း ပါးနေသေးကြောင်း သိရသည်။
ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသည်ဟု အောင်ဝင်းဇော် ထွက်ဆိုခဲ့သော်လည်း သက်သေပြနိုင်ခြင်း မရှိဟု တ
ငါးလအတွင်း မင်းလှမြို့နယ်သို့ တရားမဝင် အထောက်အထားမဲ့ ဝင်ရောက်လာသူ ဘင်္ဂါလီဦးရေ ၁ဝ၅ ဦး ဖမ်း?
ကျောက်ဖြူ အထူးစီးပွားရေးဇုန် လုပ်ငန်းများ မကြာမီ စတင်နိုင်တော့မည်